Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị na-egwu bọọlụ Scottish Ryan Fraser Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Na-egosi na aha nicknames “Anyị Nwoke, Ryzi”.
Ụdị akụkọ nwata anyị nke Ryan Fraser, gụnyere akụkọ ndụ ya na-enweghị atụ, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Nyocha ahụ gụnyere ndụ nwata ya, nzụlite ezinụlọ, agụmakwụkwọ / iwulite ọrụ, ndụ mmalite ọrụ, ụzọ ya maka akụkọ ama ama, ịrị elu akụkọ a ma ama, ndụ mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​ndụ ezinụlọ, na eziokwu ndụ, wdg.
Sean Longstaff Child Akụkọ Plus na-enweghị ihe ọmụma eziokwu
Ee, onye ọ bụla maara Fraser nye onye ọkpọ ọkpọ Scotland nke ochie na ọkachamara na-enyere aka mgbaru ọsọ. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole n'ime ndị na-akwado football na-atụle Fraser's Bio, nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a, n'enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite.
Akụkọ Ryan Fraser nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Ryan Fraser na 24th ụbọchị nke February 1994 nne ya, Debbie Fraser na nna, Graeme Fraser, na ọdụ ụgbọ mmiri nke Aberdeen, n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ Scotland, United Kingdom.
A mụrụ Scott onye agbụrụ ya na agbụrụ ya dị ọcha dịka naanị nwa nne na nna ya mụrụ.
Ryan Fraser si n'ezinụlọ ndị dị umeala n'obi, nke dị n'etiti na-etiti ụlọ na ụlọ egwuregwu.
Gịnị kpatara eji egwu egwuregwu? ọ bụ n'ihi na nne ya bụbu onye na-agba ọsọ 100 mita nke nọchiri anya Scotland na egwuregwu.
Ryan Fraser ji oge mbụ ọ dịrị ndụ na Aberdeen, Scotland tupu ya na nne na nna ya gaa Oman, mba Middle East ebe nna ya nwere ọrụ dịka onye ọrụ si mba ọzọ, TheScottishSun akụkọ.
Florian Thauvin nwa akụkọ akụkọ na-akọwaghị eziokwu
Nna Ryan Graeme Fraser mgbe ọ nwetara ọrụ mmanụ dị n'etiti ọwụwa anyanwụ mere mkpebi ịkwaga ezinụlọ ya dum.
Ryan Fraser Mmụta:
Olee otú njem njem ahụ si malite:
Mgbe Ryan Fraser bi na Oman ya na ndị mụrụ ya, o nwere bọọlụ na ihe niile o mere bụ naanị ịkụ ya egwu. Ọ maghị na ọ na-ewuli talent site na ya.
Ọ bụghị naanị Ryan na-egwu banyere bọl ya, ọ mụtara otú e si eji ya agba. Nke a bụ oge dị mkpa mkpụrụ ndụ nne ya malitere ịpụta n'egwuregwu nke nne na nna ya enweghị mmasị na mbụ.
N'ikwu okwu banyere ọdịdị, Fraser gosipụtara oge ntorobịa ya; "Mama m na papa m anaghị amasị football, n'ihi ya amaghị m otú m si bata n'ime ya. "
O nwere ike ịbụ na ha hụrụ nwa ha nwoke nke ọma n'egwuregwu ahụ mere ka ha ghara inwe mmasị na ya, kama na-eme mkpebi kacha mma ịlaghachi n'obodo ha.
Àjà nke Nna:
Mgbe nna Ryan Fraser ghọtara na nwa ya nwoke dị mma na bọl, o kpebiri ịkwụsị ọrụ mmanụ ya niile n'aha ịlaghachi Aberdeen.
Ayoze Perez Child Story Plus Ihe na-emeghi ihe omuma
Nwa okorobịa Fraser bụ 10 n'oge ezinụlọ ya kpebiri inyere ya aka ịgbaso nrọ ya nke ịbụ ndị ịgba ọsọ.
Ọ bụ ezie na Graeme siri ike ịhapụ ọrụ ọpụpụ ya na Debbie iji zoo ezumike nká site na egwuregwu, nne na nna mara mma kpebiri ịnọgide na-ebi nrọ ha site na nwa ha nwoke.
Ryan Fraser Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Mkpebi ezinụlọ Ryan Fraser kwụrụ ụgwọ ya n'ihi na ha hụrụ obere Ryan ka a na-ahọpụta n'etiti ụmụaka nwere ihe ịga nke ọma bụ ndị gabigara ule na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Kincorth nke dị na Aberdeen, Scotland.
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
Ịkwenye n'ime ụlọ akwụkwọ dị elu bụ ogologo oge, nke na-akwụ ụgwọ. Ka Ryan nọgidere na-eto eto, ọ hụrụ na ya na Ụlọ akwụkwọ Academy na-edozi ya.
Ná mmalite nke ọrụ ya, ọ bịara doo anya na Fraser na-eto eto ketara mkpụrụ ndụ ọsọ ọsọ nke nne ya. Fraser bụ nwatakịrị na nke kachasị ọsọ na agụmakwụkwọ.
Ryan Fraser, nke ziri ezi, na-arụ ọrụ n'oge ọ bụ nwata. Ebe E Si Nweta EveningExpress CO.UK
Ndụ na Aberdeen FC:
Ryan Fraser hapụrụ Kincorth Academy mgbe ọ dị afọ 16 mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta ya na Aberdeen FC.
Ka Ryan Fraser nọgidere na-etolite, ọ hụrụ na ọ na-edozi ndụ ya na Academy. O mere ọganihu dị nwayọ site na otu ọgbọ agụmakwụkwọ, na-enweta ntụkwasị obi nke onye nkụzi ntorobịa ya.
Afọ 2010 hụrụ Fraser ka ọ na-enye ohere maka igwu egwu n'òtù ndị òtù Aberdeen bụ ebe ọ nọgidere na-apụ n'egwuregwu ya.
Fraser nwere mmetụta ozugbo na ndị otu Aberdeen n'oge mmalite nke oge 2012-13 Scottish Premier League.
Nke a na-enye ya onyinye Player of the Month award maka Septemba na Ọktọba 2012.
Ryan Fraser Early Career Akụkọ. Ebe E Si Nweta Kwa Ụbọchị.
Ryan Fraser Biography - tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe Nje Na-aga Ahụhụ:
Ọrụ pụrụ iche Ryan Fraser mere ghọrọ isi iyi nke iwe na nsogbu na-aga n'ihu maka ndị na-egwu egwuregwu.
Ọnọdụ bịara n'aka nke na nke Aberdeen manager Craig Brown kwupụtara nchegbu na otu ndị na-emegide ya na-eji ọgụ siri ike na-achọ Fraser.
Ụmụaka Jamaal Lascelles Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
N'ịgbaso ihe ịma aka ndị a, Fraser kpebiri ịjụ ndọtị nkwekọrịta na-enwe olileanya na ọ ga-aga n'ihu football ya n'ebe ndịda na England. Mkpebi a megidere ndị agbụrụ Aberdeen bụ ndị meghachiri omume ọjọọ.
Ihe isi ike na-amalite na ndụ na ACF Bournemouth:
'Szọ Ryan Na-ewu ewu Akụkọ - Mgbe Ihe Na-esiri Ike. Ebe E Si Nweta talkSPORT
Nnukwu mmerụ ikpere na-ebute na ọzụzụ mbụ ya na-egbochi ọganihu mbụ nke Fraser na Bournemouth.
Ihe siiri Ryan ike nnagide bụ mmegbu e mesoro ma ya ma ezinụlọ ya site na ndị bụbu ndị agbụrụ Aberdeen bụ ndị na-enweghị obi ụtọ na ọpụpụ ya.
N'ikwu banyere ahụmahụ ahụ, Fraser kwuru n'otu oge, sị: “O siri ike ịnagide mkpebi mbufe m nke mere nke ka njọ mgbe m gbadara wee merụọ ahụ ozugbo.
Izu abụọ n'ime njem ahụ, ọ dị m ka m mere nhọrọ ziri ezi, mana etinyere m na ezinụlọ m na ya ". E nwere oge Ryan Fraser nwetara tweets na ozi, bụ ndị na-eme mkparị ma kwesị ekwesị ịghara imeghachi omume.
Ryan Fraser Bio - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'agbanyeghị mmalite mmechuihu ya na Bournemouth na mmejọ a gara n'ihu na-atụba, Fraser kwenyesiri ike mgbe niile na ọ kpọọla oku ziri ezi na mkpebi ya ịga ebe ndịda.
O kpebiri ime okwu ya na olulu ahụ karịa ị paya ntị n'ihe ndị mbụ ọ hụrụ na-ekwu banyere ya na ezinụlọ ya.
Dị ka Scott si kwuo, “Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị ka na-eche na m meela mkpebi na-ezighị ezi, dị mma. "
Oge mmerụ ahụ ghọrọ oge echiche dị mma maka Ryan Fraser bụ onye kwuru na okwu ya otu oge;
Ryan Fraser Okporo ụzọ iji weghachite site na nhụsianya. Ebe E Si Nweta AFC Bournemouth.
“Site na mmerụ ahụ, emeghị m ọtụtụ ihe na oge mbụ m, mana echere m n’ime onwe m eziokwu na m na-etolite dị ka onye ọkpụkpọ.
Enwere ihe dị na egwuregwu m nke m aghọtabeghị n'ezie. Ọ bụ oge ahụ amalitere m ịmara egwuregwu ahụ n'ime. Amụtara m mgbe m kwesịrị ime ihe, mgbe agafee bọl, mgbe m ga-abata n'ime, mgbe m ga-agbasa mbara. ”
Naanị mgbe o merụsịrị ahụ, ọ naghị ewe oge tupu Ryan amalite ịba ụba na ụsọ oké osimiri. Nke a hụrụ ya na-enweta otuto dị ukwuu maka ngosipụta ya dị egwu.
Ryan Fraser nyeere ndị otu ya aka imeri 2014/2015 Football League Championship.
Dị ka n'oge ederede, Ryan guzosie ike ugbu a na Premier League n'okpuru Eddie Howe.
Oge 2018/2019 nke mbụ na-eme egwuregwu hụrụ ya ka ọ bụrụ onye na-enyere eze aka maka Bournemouth. N'agbanyeghị nke ahụ, dị ka n'oge ederede, a na-ewere Fraser dị ka onye inyeaka kachasị mma mgbe emechara Eden Hazard na Christian Eriksen.
Taa, ụwa ahụla na mkpebi siri ike na nke a katọrọ emeela ka ịrị elu dị ịrịba ama ma gosipụtakwa akụ na ụba nke ụlọ ọgbakọ ya. Fraser gbara n'akụkụ Arnaut Danjuma na Callum Wilson tupu ịbanye na nke ikpeazụ na Newcastle.
Ndị ọzọ Bio ya, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ryan Fraser Lifehụnanya Ndụ - Nwanyị nwanyị, Nwunye, Childrenmụaka?
Ònye bụ Ryan Fraser Girlfriend or Wag?
Site na Ryan Fraser na-ebili ka a ma ama, ajụjụ a na-ekwu banyere onye ọ bụla bụ…Onye bụ enyi nwanyị Ryan Fraser ma ọ bụ WAG?.
Chefuo ịdị elu ya, ọ dịghị ihe ọ bụla na-agọnahụ na Ryan Fraser nwere àgwà ndị na-adọrọ adọrọ, nke ahụ mara mma nke na-eme ka ọ bụrụ nwanyị na-ahụ n'anya nye ụmụ nwanyị.
Otú ọ dị, dị ka ọtụtụ akụkọ dị n'ịntanetị, ọ dị ka Ryan Fraser gosipụtara na ọ ka di na-alụbeghị di dị ka n'oge ederede.
Ka o sina dị, anyị na-eche na ọ nwere ike ịnọ na mmekọrịta mana ọ na-ahọrọ ịghara ime ya n'ihu ọha, ọbụlagodi maka oge a.
Ryan Fraser Ndụ Nke Onwe:
Mata ụdị ndụ Ryan Fraser ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ. Ewepụ football, Ryan Fraser ndụ ndụ dị nnọọ ala ma dị umeala n'obi.
Dika ozo, na Personal Life, Ryan Fraser bu ihe ntinye. Ọ na-ahọrọ idebe ọkụ na egwuregwu ya, yabụ, zere ịkọ banyere ndụ onwe ya na nyiwe ọha. Nke a na - eme ka o siere ndị mgbasa ozi ike ịkọ ọtụtụ ihe banyere ya.
Ryan Fraser Ndụ Ezinụlọ:
Tupu ọ banye na football, ezinụlọ Ryan Fraser bara ọgaranya iji nweta ihe dị ka $100,000 (onye ọrụ mmanụ na-akwụ ụgwọ kwa afọ) otu afọ nwere uru ezumike nká egwuregwu maka mama ya.
Agbanyeghị, na mbụ n'isiokwu a, ọ pụtara na ọ bụghị onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ Ryan Fraser hụrụ egwuregwu n'anya na mbido.
Ị maara?… Debbie mama Fraser na-aga agba ọsọ n'egwuregwu Olimpik, ma mgbe ahụ ọ nwere mmerụ ikpere nke mere ka ọrụ ya kwụsị.
N'agbanyeghị na Debbie dị ogologo oge ọ lara ezumike nká, ọ fọrọ nke nta ka ọ gwụ nwa ya nwoke kachasị mma mgbe ha nwere ọgba ọsọ. N'ikwu okwu banyere nke ahụ, Ryan kwuru otu oge;…
“Mama m na-eme ngwa ngwa karịa m - gbasie ọsọ ike! O merụrụ ahụ n'oge ahụ, mana anyị nwere ịgba ọsọ n'okporo ámá ma ọ ga-afọ obere iti m ihe. Ọ dị obere karịa m ma ọ na-adị ngwa ngwa! ”
N'agbanyeghị na ọ na-enye nne ya ọtụtụ otuto, Fraser ga-enwe ekele ruo mgbe ebighị ebi maka nna ya bụ onye mere nnukwu àjà nke ịhapụ ego ya na-akwụ ụgwọ ọrụ mmanụ maka ọrụ ya.
All Graeme Fraser chọrọ bụ ka nwa ya nwee ike ịgba bọl ma lekwasị anya na ya n'agbanyeghị na nrọ ya.
Ryan Fraser Lifestyle:
Fraser dị ka n'oge ederede, nwere uru ahịa nke £ 16.20m dị ka TransferMarket Report si kwuo.
Agbanyeghị, eziokwu a apụtaghị na a Vzọ ndụ Lavish dị mfe nke obere ụgbọ ala na-enwu gbaa, nnukwu ụlọ, ụmụ agbọghọ na uzu. Ryan Fraser na-ahọrọ itinye ego ya na ndenye aha golf.
Eziokwu Ryan Fraser:
Ryan Fraser bụbu onye ọgwụ Pizza na Ice-Cream, ma eleghị anya ihe kpatara nsogbu nhụjuanya mbụ ya.
Eddie Howe mere ka o doo ya anya ịhapụ àgwà Pizza na Ice-creams na ndị ọzọ iji nweta usoro nri nri siri ike karịa.
Iri nri dị mma siri ike mere ka ọ ghara ịlụ ọgụ siri ike na ọgwụgwọ siri ike nke ndị na-agbachitere na-emekarị.
Ngosipụta TV mbụ ya
Ryan Fraser so n'ime ndị na-agba ụkwụ ole na ole bụ ndị na-abụ akụkụ nke ngosi TV. Ị maara?... Ọ bụ onye na-eme ihe nkiri na egwuregwu show “Soro na 5: Ọchịchị".
Banyere ogo ya:
Iguzo na 5ft 4ins, Fraser ugbu a bụ onye kacha nta na mpịakọta nke Bekee dịka n'oge ederede. N'agbanyeghi na elu, kpakpando nta a emeela nnukwu ihe n'olu n'oru.
Ryan Fraser Biography Eziokwu - Nchịkọta vidiyo:
Biko chọta n'okpuru, nchịkọta vidio YouTube maka profaịlụ a. Jiri nlezianya gaa ma denye aha anyị Youtube ọwa maka vidiyo ndị ọzọ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị Ryan Fraser Child akụkọ na-enweghị ike ịkọ akụkọ ndụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ.
Michael Olise Child Story gbakwunyere Eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Moses Simon Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya
Egwuregwu nke Scottish
Adam Armstrong Childhood akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Kevin Mbabu Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Joe Willock Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Billy Gilmour Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ndi Utold Biography Eziokwu